नेकपा फुट्दा को कता ? - Kantipath.com
नेकपा फुट्दा को कता ?
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नबाट जोगिने एउटै उपाय बाँकी छ कि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने कि त उनको राजीनामा माग्नेहरुले राजीनामा नमाग्ने । तर, दुवै सम्भावना क्षीण रहेकाले नेकपा फुटको नजिक पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारमा मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कित्ताकाट गरेर आउन भनेका छन् । उनले पार्टी फुटबाट जोगाउने सम्भावना निकै कम रहेको भन्दै को कता लाग्ने हो स्पष्ट हुन भने । उनले कडा कदमको तयारीबारे समेत जानकारी गराए ।
ओलीले मन्त्रिहरुलाई ब्रिफिङ गर्नु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेका थिए । उनी बालुवाटारमा रहँदा खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा नेकपाको अर्को समुहको बैठक थियो । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम बसेर रणनीति तय गर्दै थिए । उनीहरु कुनै हालतमा ओली हटाउने कदमबाट पछि नहट्ने अडानमा रहिरहने निष्कर्षमा पुगे ।
गएराति ओली समुहका नेताहरुले भैंसेपाटी पुगेर बामदेव गौतमलाई फकाउन खोजे । तर, उनी मानेनन् । बरु स्थायी कमिटी दुई दिन स्थगित गरेर छलफल गर्ने वातावरण बनाए । तर, आज ओली र प्रचण्डबीच छलफल भएन । बरु दुवै भावी रणनीति तयार गर्न सक्रिय भए ।
ओलीले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने निश्चित भएपछि प्रचण्ड समुह पार्टीले निर्णय गरेर सरकारबाट फिर्ता बोलाउने तयारीमा पुगेको हो । अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी पुरा भएको छ । त्यही भेउ पाएर ओलीले स्थायी कमिटीलाई हुल्लडहरुको संगठन भनिदिए । उनले अब संसदीय दलबाट अगाडि बढ्ने संकेत गरे । सबैलाई कित्ताकाट गर्न भने ।
दुवै पक्षको टकरावका कारण अब नेकपा दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ । अब कित्ताकाट हुँदा को कता लाग्लान् भन्ने चासोमा परेको छ । स्थायी कमिटीको कुल ४५ सदस्यमध्ये ३२जना प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र बामदेव समुहका छन् । १२ जना ओली पक्षमा छन् भने एकजना तटस्थ नै छन् ।
मन्त्रीहरुमा पनि अधिकांश ओली पक्षका छन् । अब मन्त्रीहरु जसले ओलीलाई समर्थन गर्दैनन् उसको राजीनामा मागिने तयारी बालुवाटारमा भएको छ । यसै पनि ती मन्त्रीहरु गोजीमा राजीनामा बोकेर हिंडिरहेका छन् ।
३१. योगेश भट्टराई
३२. लेखराज भट्ट
१. अग्निप्रसाद सापकोटा, सभामुख
Previous Previous post: आज गुरुपुर्णिमा : आफ्ना गुरुलाई शुभकामना पठाउनुहोस
Next Next post: कञ्चनपुरमा धारिलो हतियार प्रयोग गरि हत्या